လူမြိုးကွီးဝါဒီ​တှေ သတျ​​သခြေိနျ​မှာ ဇိုမီးယနျး​တှေ ညီညှတျ​ကွ – Kyaw Zaw Oo's Blog
November 6, 2019 January 24, 2020 web_master
လူမြိုးကွီးဝါဒီ​တှေ သတျ​​သခြေိနျ​မှာ ဇိုမီးယနျး​တှေ ညီညှတျ​ကွ
လူမျိုးကြီးဝါဒီ​တွေ သတ်​​သေချိန်​မှာ ဇိုမီးယန်း​တွေ ညီညွတ်​ကြ
ဖက်​ဒရယ်​စစ်​စစ်​ဖြစ်​​နိုင်​တဲ့ မိုဒယ်​ တပ်ကို တိုင်းရင်းသားပြည်​သူ့အာဏာ​အောက်​မှာထားတဲ့ မိုဒယ်​နဲ့ တိုင်းပြည်​ကို ပြန်​လည်​ဖွဲ့စည်းလိုက်​ရင်​ လက်​ရှိ တစ်​တိုင်း​တစ်​ပြည်​လုံးမှာ ရင်​ဆိုင်​​နေရတဲ့ ပြဿနာ​တွေ ငြိမ်​သက်​သွားပြီး တိုင်းပြည်​ပြန်​လည်​တည်​​ဆောက်​​ရေးကို လုပ်​နိုင်​ကြမယ်​ ဆိုတာကို ကြည့်​တတ်​ရင်​ မြင်​နိုင်​ပါတယ်​။
ဒါ​ပေမဲ့ အဲသလိုလုပ်​မယ့်​အစား ကိုယ့်​ကိုကိုယ်​ သတ်​​သေတာက ​ကောင်းဦးမယ်​လို့ လူမျိုးကြီးဝါဒီ​တွေက အ​လေးအနက်​ ယုံကြည်​ကြတဲ့အတွက်​ ​နေ့စဉ်​နဲ့အမျှ မှားယွင်းတဲ့ နိုင်​ငံ​ရေး စစ်​​ရေး ဆုံးဖြတ်​ချက်​​တွေကို အ​ကောင်​အထည်​​ဖော်​ပြီး ​အောင်​မြင်​စွာ သတ်​​သေကြလျက်​ ရှိပါတယ်​။
မြန်​မာနိုင်​ငံဟာ ​အောင်​မြင်​စွာ သတ်​​သေ​နေတဲ့နိုင်​ငံ တစ်​နိုင်​ငံဖြစ်​ပါတယ်​။
မိမိကိုယ်​ကို သတ်​​သေရာ​ရောက်​တဲ့ ဆုံးဖြတ်​ချက်​ (suicidal decision) ​တွေကို တိုင်းရင်းသား​အ​ရေး နဲ့ ပြည်​တွင်းငြိမ်းချမ်း​ရေးဘက်​မှာ လူမျိုးကြီးဝါဒီ​တွေဟာ လုပ်​​ဆောင်​​နေဆဲဖြစ်​ပါတယ်​။
၁၉၈၈ အ​ရေးအခင်းကို နှိမ်​နင်းတဲ့အခါ ​ကောင်းစွာ အသုံးကျခဲ့တဲ့ ချင်းစစ်​သား​တွေရဲ့ အသုံးတန်​ဖိုးကို လူမျိုးကြီးဝါဒီ​တွေ ပြန်​အမှတ်​ရတန်​​ကောင်းပါရဲ့ . . . အဲဒါကို​ထောက်​ထားပြီး ပြည်​သူ့စစ်​အဖြစ်​ လက်​နက်​တပ်​ဆင်​​ပေးတန်​​ကောင်းပါရဲ့လို့ ​မျှော်​လင့်​​နေကြတဲ့ စစ်​ကျွန်​​တွေရှိ​နေတာကို အခု ​တွေ့​​​နေရတယ်​။
ချင်း​တောင်​တန်း​နေသူတို့ဟာ ဘာသာစကားတစ်​ခုတည်း သုံးစွဲသူ​တွေ မဟုတ်​တဲ့အတွက်​ ​လောက်​​လောက်​လားလား ကိုယ်​ပိုင်​ စစ်​တပ်​ထူ​ထောင်​ဖို့ရာမဖြစ်​နိုင်​ဘူးလို့ ​ရှေ့က​ဆောင်းပါးတစ်​ပုဒ်​မှာ ကျွန်​​တော်​တင်​ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ (“ချင်းနဲ့ရခိုင်​ စားပွဲထိုင်​ နို်​င်​စားကြူးများ ​ပြေးလတ္တံ့” ​ဆောင်းပါး ကိုရှုပါ။)
ချင်း​တောင်​တန်း​နေသူ​တွေကို ပြည်​သူ့စစ်​အ​နေနဲ့ လူမျိုးကြီးဝါဒီ​တွေက လက်​နက်​တပ်​ဆင်​​ပေးရင်​ ဆိုးကွက်​ရှိသလို ​ကောင်းကွက်​ရှိလာမှာ ဖြစ်​တယ်​။ ဥပမာအားဖြင့်​ လက်​နက်​ကိုင်​ထားတဲ့ ရန်​သူဖြစ်​သွားတဲ့အတွက်​ တရားဝင်​​ချေမှုန်းခွင့်​ရလာတာ စတဲ့​ကောင်းကွက်​အချို့ ရှိလာမှာ ဖြစ်​​တယ်​။ ပြည်​သူ့စစ်​ဖွဲ့တာဟာ သူတို့အတွက်​ ကိုယ်​ဟာကိုယ်​ သတ်​​သေတာနဲ့တူတယ်​။ ဒါ​ပေမဲ့ အဲဒီအလားအလာ​တွေကို စာမျက်​နှာ​တွေအ​ပေါ်မှာ အကျယ်​ မ​ဆွေး​နွေးလိုပါဘူး။
ပလက်​ဝမြို့နယ်​ ​မြောက်​လက်​အစွန်​ဆုံး အိန္ဒိယနယ်​စပ်​က​နေ ကုလားတန်ြ​မစ်​​ကြောင်းအတိုင်း ​တောင်​ဘက်​ကို ဆင်းလာရင်​ မြို့နယ်​ခြားနယ်​နမိတ်​ကို​ကျော်​ပြီး ​ကျောက်​​တော်​မြို့ကို​ရောက်​တဲ့အထိ နယ်​​မြေတစ်​ခွင်​မှာ ​အေ​အေနဲ့ မြန်​မာ့တပ်​မ​တော်​နဲ့ လက်​နက်​ကိုင်​တိုက်​ပွဲမဖြစ်​တာ ဘယ်​​လောက်​ကြာပြီလဲ . . . ။ အဲသလို တိုက်​ပွဲမဖြစ်​ဘူးဆိုတဲ့ အခြအ​နေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်​ဟာဖြင့်​ ဘယ်​ဘက်​တပ်​က အဲသည်​နယ်​​မြေတစ်​ခွင်​ကို စိုးမိုးထားတယ်​လို့ အဓိပ္ပါယ်​ရပါသလဲ . . . ဒီ​မေးခွန်း​တွေကို တိုက်​ပွဲကင်းလွတ်​ရာနယ်​​မြေက စားပွဲ​ပေါ်မှာထိုင်​ရင်း ​မြေပုံကြည့်​ရင်း သတင်း​တွေကိုနား​ထောင်​ရင်း အလွယ်​တကူသိနိုင်​တဲ့အရာဖြစ်​ပါတယ်​။ ​အေ​အေတပ်​​တွေက ပလက်​ဝမြို့ကို ဝင်​မတိုက်​တာပဲရှိတယ်​ လို့ ထင်​မိတယ်​။ (ကျွန်​​တော်​​နောက်​ဆုံးသိတဲ့ ပစ်​ခတ်​မှုက ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်​ပတ်​​လောက်​က ​ကျောက်​​တော်​မြို့နဲ့ မျက်​နှာချင်းဆိုင်​က ​ရွှေလှိုင်​ရွာကို တပ်​ကဝင်​ပစ်​လို့ အရပ်​သားတစ်​​ယောက်​​သေ တစ်​​​ယောက်​ ဒဏ်​ရာရတယ်​ လို့ သတင်းမှာ သိရတယ်​။ ဒါပဲ။ ​နောက်​ပြီး ကုလားတန်​မြစ်​​ကြောမှာ NLD အမတ်​ ဦး​ဝှေ့ထင်း ကို ​အေ​အေက ​ခေါ်ယူဧည့်​ခံထားတယ်​။)
UNFC ကို ဝင်​စို့ထွက်​စို့ လုပ်​ခဲ့ကြတဲ့ ချင်း​ခေါင်း​ဆောင်​​တွေရဲ့ လုပ်​ရပ်​​တွေကို ကျွန်​​တော်​အများကြီး စိတ်​ပျက်​ခဲ့ဖူးတယ်​။ ချင်းလူငယ်​​ခြေတက်​​တွေဟာ ​ခေါင်းဖြူစွယ်​ကျိုး​တွေရဲ့ စစ်​ကျွန်​အယူအဆ​တွေကို လက်​မခံဘဲ ရခိုင်​လူငယ်​​တွေနဲ့ ပူး​ပေါင်းအလုပ်​လုပ်​ကြဖို့ လိုအပ်​ပါတယ်​။
ယ​နေ့ထက်​ထိ ကျွန်​​တော်​သိမီသ​လောက်​မှာ လက်​တစ်​ဆုပ်​စာ ချင်းတပ်​ဖွဲ့​တွေဟာ အချင်းချင်းတိုက်​ခဲ့ကြတဲ့ ထိ​တွေ့မှု​လေး​တွေ​လောက်​သာ ရှိခဲ့ပြီး လူမျိုးကြီးဝါဒီ​တွေကိုတိုက်​တဲ့ တိုက်​ပွဲ တစ်​ပွဲမှ မရှိ​ဖူး​သေးပါဘူး။ ပိုပြီးတိတိကျကျဖြစ်​​အောင်​ ​ပြောရမယ်​ဆိုရင်​ မကြားမိ​သေးဘူး။
အသက်​​တွေကိုရင်းပြီး သူ့ကိုကိုယ်​သတ်​ ကိုယ့်​ကိုသူသတ်​ တိုက်​ပွဲ​တွေကြားထဲက ရခိုင်​​တွေကို ထုတ်​ပြန်​ချက်​က​လေး​တွေထုတ်​ပြီး ခြိမ်း​ခြောက်​တဲ့​လေသံ​တွေနဲ့ ​ပြောတဲ့ CNLD ရဲ့ က​လေးကလားဆန်​မှုနဲ့ အ​မြော်​အမြင်​ကင်းမဲ့မှု​တွေကို ကာယကံရှင်​​တွေဟာ ကိုယ်​ဘာသာကိုယ်​ ဆန်းစစ်​​ဝေဖန်​မှု လုပ်​သင့်​တယ်​။
ငြိမ်းချမ်းရုံမက ကိုယ်​ပိုင်​ပြဌာန်းခွင့်​ရှိတဲ့ အခြအ​နေမှာ အားလုံးနဲ့ ချစ်​ချစ်​ကြည်​ကြည်​ ​နေချင်​ပါတယ်​။
ရခိုင်၊ ​​ရခိုင်​က​နေ အထက်​ကိုတက်​ရင်​ ချင်း၊ ချင်းက​နေ အထက်​ကိုတက်​ရင်​ နာဂ၊ ဒီထက်​ အ​ရှေ့​မြောက်​ဘက်​မှာ ကချင်​၊ ကချင်​ရဲ့ အ​ရှေ့​တောင်​ဘက်​မှာ ရှမ်းပြည်​​ထောင်​များ၊ ရှမ်းပြည်​​ထောင်​များရဲ့ ​အောက်​ဘက်​မှာ ကယား၊ မွန်​၊ ကရင်​ . . . စသည်​ဖြင့်​ ရခိုင်​က​နေ တ​ကွေ့တပတ်​ ဧရာဝတီမြစ်​​ကြောင်း​နေလူ​တွေကို ​ဝေ့ဝိုက်​ပြီး​တော့ ဟိုး​ ​အောက်​ဘက်​ မွန်​၊ ကရင်​အထိကို မြန်​မာပြည်​ရဲ့ ဇိုမီးယား (Zomia) လို့ အ​နောက်​နိုင်​ငံ စာ​ရေးသူအချို့က ​ခေါ်ကြပါတယ်​။ အလွယ်​​ပြောရရင်​ ဧရာဝတီမြစ်​​ကြောကို ဗဟိုပြု​နေသူများရဲ့ နယ်​​မြေကို ပတ်​ပတ်​လည်​ ​ဝေ့ဝိုက်​ရံထားတဲ့ နယ်​​မြေဟာ မြန်​မာပြည်​ရဲ့ ဇိုမီးယား ဖြစ်​ပါတယ်​။
မြန်​မာ ​ဇိုမီးယား ရဲ့ ပင်​လယ်​ထွက်​​ပေါက်​ဟာ တစ်​ဘက်​မှာ ရခိုင်​ဖြစ်​ပြီး ​နောက်​တစ်​ဖက်​က ပင်​လယ်​ထွက်​​ပေါက်​ဟာ မွန်​၊ ကရင်​ ဖြစ်​တယ်​ လို့ ဆိုကြပါတယ်​။
နှစ်​​ပေါင်း ခုနစ်​ဆယ်​ကြာ နိုင်​ငံရဲ့ဘက်​ဂျက်​သုံးစွဲမှုမှာ ယ​နေ့ထက်​ထိ အလယ်​ပိုင်းသား​တွေက နှစ်စဉ် ​​ဘက်​ဂျက်​ရဲ့ (၉၃) ရာခိုင်​နှုန်းကို ကိုင်​တွယ်​ သုံးစွဲလာခဲ့ကြပြီး ဇိုမီးယန်း​တွေရဲ့နယ်​​မြေမှာ စုစု​ပေါင်း ခုနစ်​ရာခိုင်​နှုန်းသာ နှစ်​စဉ်​ သုံးစွဲပါတယ်​။
အခုနှစ်​​ပေါင်း ခုနှစ်​ဆယ်​ကျော်​ကြာ လက်​နက်​ကိုင်​ပြည်​တွင်း ပဋိပက္ခဟာ အလယ်​ပိုင်းသား​တွေနဲ့ ဇိုမီးယန်း​တွေနဲ့အကြား ဖြစ်​​နေကြတာဖြစ်​တယ်​လို့ တချို့က အဓိပ္ပါယ်​ဖွင့်​ဆိုကြပါတယ်​။
မကြာ​သေးခင်​က အား​ပျော့သွားတဲ့ UNFC ဟာ ဇိုမီးယန်းစုစည်းမှု တစ်​ခုဖြစ်​ပြီး လက်​ရှိ FPNCC ဟာ တစိတ်​တစ်​ပိုင်း ဇိုမီးယန်းစုစည်းမှု ဖြစ်​တယ်​ လို့ ဆိုနိုင်​တယ်​။ ဒါ​ပေမဲ့ ပိုသစ်​လွင်​တယ်​၊ ပိုအား​ကောင်းတယ်​၊ ​ရှေ့ကို ဦး​ဆောင်​တယ်​။
ဇိုမီးယန်း​တွေ ညီညွတ်​ကြပါမှ လူမျိုးကြီးဝါဒီ​တွေနဲ့ စကား​ပြောရာမှာ အားရှိပါးရှိကျမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။ စကား​ပြောစရာ ရှိ​နေပါတယ်​။
ဖကျ​ဒရယျ​စဈ​စဈ​ဖွဈ​​နိုငျ​တဲ့ မိုဒယျ​ တပျကို တိုငျးရငျးသားပွညျ​သူ့အာဏာ​အောကျ​မှာထားတဲ့ မိုဒယျ​နဲ့ တိုငျးပွညျ​ကို ပွနျ​လညျ​ဖှဲ့စညျးလိုကျ​ရငျ​ လကျ​ရှိ တဈ​တိုငျး​တဈ​ပွညျ​လုံးမှာ ရငျ​ဆိုငျ​​နရေတဲ့ ပွဿနာ​တှေ ငွိမျ​သကျ​သှားပွီး တိုငျးပွညျ​ပွနျ​လညျ​တညျ​​ဆောကျ​​ရေးကို လုပျ​နိုငျ​ကွမယျ​ ဆိုတာကို ကွညျ့တတျ​ရငျ​ မွငျ​နိုငျ​ပါတယျ​။
ဒါ​ပမေဲ့ အဲသလိုလုပျ​မယျ့အစား ကိုယျ့​ကိုကိုယျ​ သတျ​​သတောက ​ကောငျးဦးမယျ​လို့ လူမြိုးကွီးဝါဒီ​တှကေ အ​လေးအနကျ​ ယုံကွညျ​ကွတဲ့အတှကျ​ ​နစေ့ဉျ​နဲ့အမြှ မှားယှငျးတဲ့ နိုငျ​ငံ​ရေး စဈ​​ရေး ဆုံးဖွတျ​ခကျြ​​တှကေို အ​ကောငျ​အထညျ​​ဖျော​ပွီး ​အောငျ​မွငျ​စှာ သတျ​​သကွေလကျြ​ ရှိပါတယျ​။
မွနျ​မာနိုငျ​ငံဟာ ​အောငျ​မွငျ​စှာ သတျ​​သေ​နတေဲ့နိုငျ​ငံ တဈ​နိုငျ​ငံဖွဈ​ပါတယျ​။
မိမိကိုယျ​ကို သတျ​​သရော​ရောကျ​တဲ့ ဆုံးဖွတျ​ခကျြ​ (suicidal decision) ​တှကေို တိုငျးရငျးသား​အ​ရေး နဲ့ ပွညျ​တှငျးငွိမျးခမျြး​ရေးဘကျ​မှာ လူမြိုးကွီးဝါဒီ​တှဟော လုပျ​​ဆောငျ​​နဆေဲဖွဈ​ပါတယျ​။
ခငျြး​တောငျ​တနျး​နသေူတို့ဟာ ဘာသာစကားတဈ​ခုတညျး သုံးစှဲသူ​တှေ မဟုတျ​တဲ့အတှကျ​ ​လောကျ​​လောကျ​လားလား ကိုယျ​ပိုငျ​ စဈ​တပျ​ထူ​ထောငျ​ဖို့ရာမဖွဈ​နိုငျ​ဘူးလို့ ​ရှကေ့​ဆောငျးပါးတဈ​ပုဒျ​မှာ ကြှနျ​​တျော​တငျ​ပွခဲ့ပွီးပါပွီ။ (“ခငျြးနဲ့ရခိုငျ​ စားပှဲထိုငျ​ နို​ငျ​စားကွူးမြား ​ပွေးလတ်တံ့” ​ဆောငျးပါး ကိုရှုပါ။)
၁၉၈၈ အ​ရေးအခငျးကို နှိမျ​နငျးတဲ့အခါ ​ကောငျးစှာ အသုံးကခြဲ့တဲ့ ခငျြးစဈ​သား​တှရေဲ့ အသုံးတနျ​ဖိုးကို လူမြိုးကွီးဝါဒီ​တှေ ပွနျ​အမှတျ​ရတနျ​​ကောငျးပါရဲ့ . . . အဲဒါကို​ထောကျ​ထားပွီး ပွညျ​သူ့စဈ​အဖွဈ​ လကျ​နကျ​တပျ​ဆငျ​​ပေးတနျ​​ကောငျးပါရဲ့လို့ ​မြှျော​လငျ့​နကွေတဲ့ စဈ​ကြှနျ​​တှရှေိ​နတောကို အခု ​တှေ့​​​နရေတယျ​။
ခငျြး​တောငျ​တနျး​နသေူ​တှကေို ပွညျ​သူ့စဈ​အ​နနေဲ့ လူမြိုးကွီးဝါဒီ​တှကေ လကျ​နကျ​တပျ​ဆငျ​​ပေးရငျ​ ဆိုးကှကျ​ရှိသလို ​ကောငျးကှကျ​ရှိလာမှာ ဖွဈ​တယျ​။ ဥပမာအားဖွငျ့​ လကျ​နကျ​ကိုငျ​ထားတဲ့ ရနျ​သူဖွဈ​သှားတဲ့အတှကျ​ တရားဝငျ​​ခမြှေုနျးခှငျ့ရလာတာ စတဲ့​ကောငျးကှကျ​အခြို့ ရှိလာမှာ ဖွဈ​​တယျ​။ ပွညျ​သူ့စဈ​ဖှဲ့တာဟာ သူတို့အတှကျ​ ကိုယျ​ဟာကိုယျ​ သတျ​​သတောနဲ့တူတယျ​။ ဒါ​ပမေဲ့ အဲဒီအလားအလာ​တှကေို စာမကျြ​နှာ​တှအေ​ပျေါမှာ အကယျြ​ မ​ဆှေး​နှေးလိုပါဘူး။
ပလကျ​ဝမွို့နယျ​ ​မွောကျ​လကျ​အစှနျ​ဆုံး အိန်ဒိယနယျ​စပျ​က​နေ ကုလားတနျွ​မဈ​​ကွောငျးအတိုငျး ​တောငျ​ဘကျ​ကို ဆငျးလာရငျ​ မွို့နယျ​ခွားနယျ​နမိတျ​ကို​ကြျော​ပွီး ​ကြောကျ​​တျော​မွို့ကို​ရောကျ​တဲ့အထိ နယျ​​မွတေဈ​ခှငျ​မှာ ​အေ​အနေဲ့ မွနျ​မာ့တပျ​မ​တျော​နဲ့ လကျ​နကျ​ကိုငျ​တိုကျ​ပှဲမဖွဈ​တာ ဘယျ​​လောကျ​ကွာပွီလဲ . . . ။ အဲသလို တိုကျ​ပှဲမဖွဈ​ဘူးဆိုတဲ့ အခွအ​နရေဲ့ အဓိပ်ပါယျ​ဟာဖွငျ့ ဘယျ​ဘကျ​တပျ​က အဲသညျ​နယျ​​မွတေဈ​ခှငျ​ကို စိုးမိုးထားတယျ​လို့ အဓိပ်ပါယျ​ရပါသလဲ . . . ဒီ​မေးခှနျး​တှကေို တိုကျ​ပှဲကငျးလှတျ​ရာနယျ​​မွကေ စားပှဲ​ပျေါမှာထိုငျ​ရငျး ​မွပေုံကွညျ့ရငျး သတငျး​တှကေိုနား​ထောငျ​ရငျး အလှယျ​တကူသိနိုငျ​တဲ့အရာဖွဈ​ပါတယျ​။ ​အေ​အတေပျ​​တှကေ ပလကျ​ဝမွို့ကို ဝငျ​မတိုကျ​တာပဲရှိတယျ​ လို့ ထငျ​မိတယျ​။ (ကြှနျ​​တျော​​နောကျ​ဆုံးသိတဲ့ ပဈ​ခတျ​မှုက ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈ​ပတျ​​လောကျ​က ​ကြောကျ​​တျော​မွို့နဲ့ မကျြ​နှာခငျြးဆိုငျ​က ​ရှလှေိုငျ​ရှာကို တပျ​ကဝငျ​ပဈ​လို့ အရပျ​သားတဈ​​ယောကျ​​သေ တဈ​​​ယောကျ​ ဒဏျ​ရာရတယျ​ လို့ သတငျးမှာ သိရတယျ​။ ဒါပဲ။ ​နောကျ​ပွီး ကုလားတနျ​မွဈ​​ကွောမှာ NLD အမတျ​ ဦး​ဝှထေ့ငျး ကို ​အေ​အကေ ​ချေါယူဧညျ့ခံထားတယျ​။)
UNFC ကို ဝငျ​စို့ထှကျ​စို့ လုပျ​ခဲ့ကွတဲ့ ခငျြး​ခေါငျး​ဆောငျ​​တှရေဲ့ လုပျ​ရပျ​​တှကေို ကြှနျ​​တျော​အမြားကွီး စိတျ​ပကျြ​ခဲ့ဖူးတယျ​။ ခငျြးလူငယျ​​ခွတေကျ​​တှဟော ​ခေါငျးဖွူစှယျ​ကြိုး​တှရေဲ့ စဈ​ကြှနျ​အယူအဆ​တှကေို လကျ​မခံဘဲ ရခိုငျ​လူငယျ​​တှနေဲ့ ပူး​ပေါငျးအလုပျ​လုပျ​ကွဖို့ လိုအပျ​ပါတယျ​။
ယ​နထေ့ကျ​ထိ ကြှနျ​​တျော​သိမီသ​လောကျ​မှာ လကျ​တဈ​ဆုပျ​စာ ခငျြးတပျ​ဖှဲ့​တှဟော အခငျြးခငျြးတိုကျ​ခဲ့ကွတဲ့ ထိ​တှမှေု့​လေး​တှေ​လောကျ​သာ ရှိခဲ့ပွီး လူမြိုးကွီးဝါဒီ​တှကေိုတိုကျ​တဲ့ တိုကျ​ပှဲ တဈ​ပှဲမှ မရှိ​ဖူး​သေးပါဘူး။ ပိုပွီးတိတိကကြဖြွဈ​​အောငျ​ ​ပွောရမယျ​ဆိုရငျ​ မကွားမိ​သေးဘူး။
အသကျ​​တှကေိုရငျးပွီး သူ့ကိုကိုယျ​သတျ​ ကိုယျ့ကိုသူသတျ​ တိုကျ​ပှဲ​တှကွေားထဲက ရခိုငျ​​တှကေို ထုတျ​ပွနျ​ခကျြ​က​လေး​တှထေုတျ​ပွီး ခွိမျး​ခွောကျ​တဲ့​လသေံ​တှနေဲ့ ​ပွောတဲ့ CNLD ရဲ့ က​လေးကလားဆနျ​မှုနဲ့ အ​မွျော​အမွငျ​ကငျးမဲ့မှု​တှကေို ကာယကံရှငျ​​တှဟော ကိုယျ​ဘာသာကိုယျ​ ဆနျးစဈ​​ဝဖေနျ​မှု လုပျ​သငျ့တယျ​။
ငွိမျးခမျြးရုံမက ကိုယျ​ပိုငျ​ပွဌာနျးခှငျ့ရှိတဲ့ အခွအ​နမှော အားလုံးနဲ့ ခဈြ​ခဈြ​ကွညျ​ကွညျ​ ​နခေငျြ​ပါတယျ​။
ရခိုငျ၊ ​​ရခိုငျ​က​နေ အထကျ​ကိုတကျ​ရငျ​ ခငျြး၊ ခငျြးက​နေ အထကျ​ကိုတကျ​ရငျ​ နာဂ၊ ဒီထကျ​ အ​ရှေ့​မွောကျ​ဘကျ​မှာ ကခငျြ​၊ ကခငျြ​ရဲ့ အ​ရှေ့​တောငျ​ဘကျ​မှာ ရှမျးပွညျ​​ထောငျ​မြား၊ ရှမျးပွညျ​​ထောငျ​မြားရဲ့ ​အောကျ​ဘကျ​မှာ ကယား၊ မှနျ​၊ ကရငျ​ . . . စသညျ​ဖွငျ့ ရခိုငျ​က​နေ တ​ကှတေ့ပတျ​ ဧရာဝတီမွဈ​​ကွောငျး​နလေူ​တှကေို ​ဝဝေို့ကျ​ပွီး​တော့ ဟိုး​ ​အောကျ​ဘကျ​ မှနျ​၊ ကရငျ​အထိကို မွနျ​မာပွညျ​ရဲ့ ဇိုမီးယား (Zomia) လို့ အ​နောကျ​နိုငျ​ငံ စာ​ရေးသူအခြို့က ​ချေါကွပါတယျ​။ အလှယျ​​ပွောရရငျ​ ဧရာဝတီမွဈ​​ကွောကို ဗဟိုပွု​နသေူမြားရဲ့ နယျ​​မွကေို ပတျ​ပတျ​လညျ​ ​ဝဝေို့ကျ​ရံထားတဲ့ နယျ​​မွဟော မွနျ​မာပွညျ​ရဲ့ ဇိုမီးယား ဖွဈ​ပါတယျ​။
မွနျမာ ​ဇိုမီးယား ရဲ့ ပငျ​လယျ​ထှကျ​​ပေါကျ​ဟာ တဈ​ဘကျ​မှာ ရခိုငျ​ဖွဈ​ပွီး ​နောကျ​တဈ​ဖကျ​က ပငျ​လယျ​ထှကျ​​ပေါကျ​ဟာ မှနျ​၊ ကရငျ​ ဖွဈ​တယျ​ လို့ ဆိုကွပါတယျ​။
နှဈ​​ပေါငျး ခုနဈ​ဆယျ​ကွာ နိုငျ​ငံရဲ့ဘကျ​ဂကျြ​သုံးစှဲမှုမှာ ယ​နထေ့ကျ​ထိ အလယျ​ပိုငျးသား​တှကေ နှဈစဉျ ​​ဘကျ​ဂကျြ​ရဲ့ (၉၃) ရာခိုငျ​နှုနျးကို ကိုငျ​တှယျ​ သုံးစှဲလာခဲ့ကွပွီး ဇိုမီးယနျး​တှရေဲ့နယျ​​မွမှော စုစု​ပေါငျး ခုနဈ​ရာခိုငျ​နှုနျးသာ နှဈ​စဉျ​ သုံးစှဲပါတယျ​။
အခုနှဈ​​ပေါငျး ခုနှဈ​ဆယျ​ကြျော​ကွာ လကျ​နကျ​ကိုငျ​ပွညျ​တှငျး ပဋိပက်ခဟာ အလယျ​ပိုငျးသား​တှနေဲ့ ဇိုမီးယနျး​တှနေဲ့အကွား ဖွဈ​​နကွေတာဖွဈ​တယျ​လို့ တခြို့က အဓိပ်ပါယျ​ဖှငျ့​ဆိုကွပါတယျ​။
မကွာ​သေးခငျ​က အား​ပြော့သှားတဲ့ UNFC ဟာ ဇိုမီးယနျးစုစညျးမှု တဈ​ခုဖွဈ​ပွီး လကျ​ရှိ FPNCC ဟာ တစိတျ​တဈ​ပိုငျး ဇိုမီးယနျးစုစညျးမှု ဖွဈ​တယျ​ လို့ ဆိုနိုငျ​တယျ​။ ဒါ​ပမေဲ့ ပိုသဈ​လှငျ​တယျ​၊ ပိုအား​ကောငျးတယျ​၊ ​ရှကေို့ ဦး​ဆောငျ​တယျ​။
ဇိုမီးယနျး​တှေ ညီညှတျ​ကွပါမှ လူမြိုးကွီးဝါဒီ​တှနေဲ့ စကား​ပွောရာမှာ အားရှိပါးရှိကမြှာ ဖွဈ​ပါတယျ​။ စကား​ပွောစရာ ရှိ​နပေါတယျ​။
Previous ခငျြးနှငျ့ ရခိုငျ​ စားပှဲထိုငျ​၊ နိုငျ​စားကွူးမြား ​ပွေးလတ်တံ့
Next အိန်ဒိယ၊ ကုလားတနျ​ ပ​ရောဂကျြ​၊ NON-STATE ACTOR ​အေ​အေ